Moto: Fampidinana maimaim-poana amin'ny ranomandry amin'ny iPhone | Vaovao IPhone
Moto: Ao amin'ny Thin Ice, ny fampiharana amin'ny herinandro izay azonao sintonina maimaim-poana
Ny fampiharana amin'ny herinandro ao amin'ny App Store dia Bisikileta: amin'ny gilasy manify, lalao novolavolain'i Chillingo fa amin'izao fotoana izao dia afaka maka maimaim-poana tanteraka ianao.
Amin'ny bisikileta: amin'ny Ice Thin dia a platform lalao izay tsy maintsy hanatontosantsika andian-drafitra tena voafetra handresena ireo ambaratonga 20 misy sy ireo misiona 80 amin'ny fitambarany.
Angamba ny tena mahasarika ny sain'ity lohateny ity dia ny fizotrany, manolotra scenario miaraka aminy estetika tena tsy mitovy amin'ny zatra hitantsikaEny, izy rehetra dia samy manana ny toetr'andro mangatsiaka. Rehefa mandroso isika, ny kojakoja, ny fanavaozana ary ny kojakoja ilaina hafa dia azo raisina izay ho hitantsika ao amin'ny magazay Icycle: On Thin Ice.
Ankehitriny maro amintsika no manao vakansy, bisikileta: amin'ny Thin Ice dia hanome fialamboly mandritra ny ora maro isika, koa eny, manoro hevitra aho fa Ankafizo ny scenario hamindra antsika ny lalao sy ny feon-kira satria tsy dia matetika loatra ny mahita anaram-boninahitra mitandrina tsara amin'ny ambaratonga famolavolana, koa, raha manana fahaiza-manao ampy handresena ny ambaratonga amin'ny alàlan'ny fanamorana izy, dia ho fohy ny lalao.
Soa ihany, manana maromaro isika fandrisihana hilalao azy io indray indray. Ny efijery tsirairay dia manana olana telo izay hovohana isaky ny mahavita azy isika.
Raha te-hahazo môtô ianao: amin'ny Ice Thin nefa tsy mila mandoa vola dia araraoty ny fisintomanao azy dieny mbola izy io App amin'ny herinandro ao amin'ny App Store:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Moto: Ao amin'ny Thin Ice, ny fampiharana amin'ny herinandro izay azonao sintonina maimaim-poana